Owen oo sheegay in xiddig ka tirsan Liverpool ay saameyn weyn ku yeelan doonto maqnaanshiyaha Van Dijk – Gool FM
(Liverpool) 22 Okt 2020. Xiddigii hore kooxda Liverpool ee Michael Owen ayaa aaminsan in maqnaanshiyaha Virgil van Dijk ay saameyn weyn ku yeelan doonto xiddiga reer England ee Trent Alexander-Arnold.
Virgil van Dijk ayaa ka maqnaan doona kooxdiisa Liverpool inta ka harsan xilli ciyaareedkaan, kaddib markii dhaawac jilibka ah uu ka soo gaaray kulankii Merseyside derby oo ay la ciyaareen naadiga Everton.
Haddaba Michael Owen wuxuu aaminsan yahay in Virgil van Dijk uu xuriyad u siinayay Trent Alexander-Arnold inuu ka qeyb qaato dhanka weerarka, laakiin maqnaanshiyaha daafaca reer Holland ayaa culeys weyn oo dhanka daafaca ah saari doonta Reds xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Xiddigii hore kooxda Liverpool ee Michael Owen, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u maleynayaa in Trent Alexander-Arnold uu noqon doono ciyaaryahanka u xiisi doono Van Dijk, in ka badan ciyaaryahan kasta oo Liverpool ka ciyaara”.
“Alexander-Arnold dabcan waa ciyaaryahan inta badan ka qeyb qaata dhanka weerarka, waana mid layaab leh arrintaas”.
Waxaa xusid mudan in Alexander-Arnold uu yahay mid kamid ah xidigaha ugu gool caawinta badan horyaalka Premier League.